कामरेड, चुनाव फेरि आउँछ है !
नवराज कुँवर काठमाडाैं, १५ वैशाख
‘कामरेड’हरूलाई सुझाव त्यति मन पर्दैन । किनकि, तपाईंहरू त्यही गर्नुहुन्छ, जे तपाईंहरूलाई लाग्छ । चाहे त्यो देशका विरुद्ध होस् वा जनताको । आफूलाई फाइदा हुने देखेपछि गरिहाल्नुहुन्छ तैपनि एउटा सचेत नागरिक भएकाले गुनासा र सुझाव राख्न मन लाग्यो ।
कामरेडहरू कहिले माओ जस्तो बन्न खोज्नुहुन्छ, कहिले कार्ल मार्क्स, कहिले लेनिन/स्टालिन त कहिले ख्रुस्चेवजस्तो । उनीहरूकै सिद्धान्त बोकेपछि यति त गर्नु परिहाल्यो । कहिलेकाहीँ तपाईंहरूमध्ये कतिपय त बेनितो मुसोलिनीजस्तो पनि बन्न खोज्नुहुन्छ । तर, सिर्फ बन्न मात्र खोज्नुहुन्छ, बनिहाल्नु हुन्न ।
मलाई लाग्दैन कि तपाईंहरू कहिल्यै त्यस्तो बन्नुहुन्छ । तपाईंहरूसँग न माओ, मार्क्सको जस्तो क्रान्तिको हुती छ, न मुसोलिनी जस्तो निरङ्कुश बन्न सक्ने तागत । तपाईंहरू त बीचमा बसेर ‘स्याल हुइँया’ मात्र मच्चाउनुहुन्छ । उनीहरूका अगाडि तपाईंहरूको हैसियत भनेकाे सिर्फ ‘बिचौलिया’ मात्र हो- न अघि बढ्न सक्ने, न त पछि हट्ने । देश त्यस्तै हालतमा छ ।
नभए यतिबेला देश कहाँ हुन्थ्यो होला ! गोकुल बाँस्कोटाको जस्तो लाग्ने लिक्ड अडियोमा ४ हजार करोड रुपैयाँको डिल भइरहेको हुन्थ्यो । महामारीमा औषधि खरिद गर्दा मन्त्री र तालुकदार निकायले १० हजार करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्ने समाचार आउँथ्यो ।
बूढीगण्डकी आयोजना ठेक्का लगाउँदा दलहरूले २ हजार करोड डलर कमिसन खाएको खुलासा भन्ने हेडलाइनले अखबारका पहिलाे पेज भरिन्थे । तपाईंहरूमध्ये कतिले साउथ इन्डियन फिल्म हेर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन । हेर्नु हुन्न भने कहिलेकाहीँ हेर्नुहोला, लुटेरा समूहले एउटा बैंकबाट हाम्रो देशको कुल बजेटभन्दा बढी रकम लुटेर भाग्छ । त्यो फिल्म हो तर हाम्रो छिमेकी मुलुकको हैसियत त त्यही नै हो ।
कम्युनिस्टहरूले नै बनाएको चीन सरकारलाई नै हेर्नुहोस् न । २–४ रातमा अस्पताल तयार गर्छ, महामारी फैलिँदा रोबोटलाई काम लगाउँछ । कृत्रिम बादल बनाउँछ, पानी पार्छ । अब आफूलाई हेर्नुहोस्, थोरै पनि धिक्कार लाग्दैन ?
कामरेडहरू, ३ तहको चुनावमा आमनेपालीले जिस्किएर तपाईंहरूलाई भोट हालेको हुँदै होइन । छोरो विदेश गएकाले बुढेसकालमा १ लोटा पानी सारेर दिने मान्छे नहुने बुबाआमाले तपाईंहरूलाई भोट हालेका छन् । विदेशमा काम गर्न जाँदा बलात्कृत भएकी छोरीका बुबाआमाले भोट खसालेका छन् । महँगो अस्पतालमा उपचार गराउन नसकी रोग पालेर बसेका विपन्नहरूले भोट खसालेका छन् । सडकमा मागेर गुजारा चलाउनेदेखि गिट्टी कुटेर चुह्लोमा आगो बाल्नेसम्म तपाईंहरूका मतदाता हुन् ।
इमानदार नेता, राम्रो शासन व्यवस्था भयो भने विदेशिएको छोरा फर्कने आसमा ती बुढाबूढीले भोट हालेका हुन् । आफ्नी छोरीजस्तै अरू कसैका छोरीले विदेशमा बलात्कृत हुन नपरोस्, कुनै पनि चेलीले विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होस्, यो सोचेर ती पीडित बाउआमाले भोट खसालेका हुन् । आफूले सडकमा बसेर वा गिट्टी कुटेर जीवन चलाए पनि आफ्ना छोराछोरीले यस्तो भोग्न नपरोस्, यो सोचेर मान्छेले तपाईंहरूलाई भोट दिएका हुन् ।
तपाईंहरूले देखाएको आर्थिक विकासको सपनामा विश्वास गरेर जनताले भोट हालेका हुन् । तर, के तपाईंहरूको गति, दिशा, कार्यशैली र व्यवहार जनताको अपेक्षाअनुसार छ त ? तपाईंहरूलाई लाग्छ, जनता तपाईंहरूका क्रियाकलाप देखेर सन्तुष्ट छन् ? तपाईंहरूलाई लाग्छ, यो पाराले मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ?
आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार, तपाईंहरूकै छत्रछायाँमा सलबलाएको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरणमा तपाईंहरू नै पर्दापछाडिको ‘भिलेन’का रूमा देखिनुभएको छ । कामरेडहरू, हुँदाहुँदा कोरोना भाइरसको महामारीले देश आक्रान्त बनेका बेला तपाईंहरूका काखमा छुनुमुनु गरिरहेका हल्लनदासहरू कमिसन खाने चक्करमा कन्दनी खुस्केको थाहा पाउन छाडिसकेको पनि देखियो ।
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अपराधमा एकपछि अर्को गर्दै कामरेडहरूको कर्तुत खुल्दै गएका छन् । तपाईंहरूलाई के थाहा, यो शैलीले तल्लो स्तरका कार्यकर्ताले कति वचनवाण सहनुपरेको छ ।
तपाईंहरूको सरकार बनेपछि देशमा भएका विभिन्न प्रकरणको छिनोफानो हुनै बाँकी छ । १ जना पूर्वआईजीपीको पछिल्लो हर्कतले कतिपय प्रकरण जानीजानी ढिसमिस पारिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ, तथ्य त अलिक इमानदार व्यक्ति प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वमा आएपछि थाहा पाइएला । तर, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र जवाफहीनता निम्त्याउनमा कामरेडहरूकै गतिविधि बढी जिम्मेवार देखिएकाे छ ।
नेपाल र नेपाली कोभिड- १९ विरुद्ध लडिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइदिनुभयो । विपक्षी पार्टी फुटाएर शक्तिशाली बन्ने उहाँको मनशाय रहेछ । त्यसैले त धनुषाबाट सांसदलाई ‘अपहरण शैली’मा काठमाडौं झिकाउन लगाउनुभयो ।
यस कार्यमा उहाँले मिनी कामरेड हरूलाई खटाउनुभयो । ‘के निहुँ पाऊँ र कनिका पोक्याऊँ’ पोजिसनमा बसेका अर्का खेमाका कामरेडहरूले बहाना पाइहाले । देशको स्थिति के छ, अहिले के गर्न हुन्छ, के हुँदैन भनेर दुई वा तीनै खेमाका कामरेडहरूले थोरै पनि हेक्का राखेनन् र थाले जुध्न । अझ सरकार ढाल्ने कसरतदेखि मध्यावधि चुनावसम्मको प्रयास भइरहेको छ । यो कृत्याकृत्य कामरेडहरूका लागि नौलो त होइन तर ३ तहको चुनावमा गरेको वाचा र प्रतिवद्धताविपरीत हो ।
तपाईंहरूलाई अहिले जस्तो मौका शायदै मिल्ला । यति कमजोर विपक्षी दल, जनताको साथ, शक्तिशाली सरकार । तर, खोइ ? यसरी आउँछ समृद्धि ? अघिल्लो चुनावमा त ढाँट्नुभयो, हेक्का राख्नुहोला कामरेडहरू, चुनाव त फेरि आइहाल्छ ।
जय नेपाल कामरेड !
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १५, २०७७, १३:२३:००